I-ultrasound ye-gynecological: ngukuphi usuku lomjikelezo, lapho ungayenza khona, umbhalo
Ukuhlolwa njalo kusiza umuntu ukuba avimbele noma abone pathologies eziningi ngesikhathi. Ngaphandle kobuchwepheshe besimanje, ochwepheshe abanakuluthola kahle futhi banikeze ukwelashwa okufanele. Njalo ngonyaka imithi iqala: ikhulu lama-21 liyisikhathi lapho ukwelashwa kuletha imiphumela emihle ngisho nasezimo ezidabukisayo kakhulu.
Kusukela kulesi sihloko uzothola mayelana nokuxilongwa, okuhloselwe abesifazane. Ibizwa ngokuthi i-ultrasound gynecological. Ngolunye usuku lomjikelezo ukwenza lokhu - kuxhomeke esimweni. Ake sicabangele wonke amacala.
Yenza i-ultrasound ye- gynecological iyadingeka kwabesifazane okungenani kanye ngonyaka. Uma kukhona izikhalazo, udokotela angase anikeze ukuhlolwa okwengeziwe. Isizathu sokuxilongwa kuyoba yizimpawu ezilandelayo:
Ukuya esikhathini eside noma ukuphuma kwegazi phakathi nomjikelezo;
Ubuhlungu engxenyeni engezansi ye-peritoneum, ukukhathazeka okuvamile nokubuthakathaka;
Ukukhipha ngephunga elimnandi nokungafani okungavamile;
Ukuphuza esikhathini sokungabikho kokukhulelwa;
Ukusola kwezinto ezifana ne-endometritis, i-endometriosis, i-salpingitis nokunamathela ;
Ukutholakala kwezicubu ezincane ze-pelvis: i-fibroids, i-cysts yama-ovari kanye ne-endocervix.
Ukuxilongwa nge-ultrasound kwenziwa nakwabesifazane abathola ukwelashwa. Kulesi simo, kusiza ukutadisha ukuphumelela kokwelashwa okhethiwe. Ngokuvamile odokotela banikeze izifundo eziyinkimbinkimbi, okuyinto, ngaphezu kwe-ultrasound, ihlanganisa eziningi zokuhlola ukuhlolwa kwelabhoratri.
Eminyakeni yamuva nje, cishe bonke abameleli besifazane ababuthakathaka bayazi ukuthi i-ultrasound yenziwe kuphi. Ungaqhuba ucwaningo kokubili emitholampilo kahulumeni nangasese. Ukuze i-diagnostic ikhululeke, udinga ukuthola i-aphoyintimenti evela kudokotela. Ukwenza lokhu, thintana nodokotela bese utshela izimpawu ezikhathazayo. Uma unepasipoti nenqubomgomo yomshuwalense, uzonikezwa i-X ray ray. Kuleli klayenti ngeke kudingeke ukhokhe.
Abanye abameleli besifazane ababuthakathaka bakhetha ukusebenzisa emitholampilo yangasese. Kunomqondo othile kulokhu, isibonelo, uma i-ultrasound isenziwa esikhungweni sombuso, njalo uhla lwabalindile lwenqubo. Abaningi kufanele balinde amasonto. Kodwa ukuhlukumeza okungahleliwe kungabonisa, ngokulandelana, imiphumela engalungile. Kuzophela ngeqiniso lokuthi ukuxilongwa kuzosungulwa ngokungalungile, kanti ukwelashwa kuyoba usizo. Yingakho wonke owesifazane kubalulekile ukwazi ukuthi i-ultrasound yomzimba yenziwa nini (ngukuphi usuku lomjikelezo). Ungathola okuningi kulesi sihloko.
Ngesicelo sakho noma isincomo sesidokotela ungavakashela isikhungo sezokwelapha se-ultrasound. Kulezi zikhungo, akudingeki ulinde. Ochwepheshe abanokuhlangenwe nakho bazokwenza ngokushesha ukuxilonga futhi bakunike umphumela. Ngaphezu kwalokho, eminye imitholampilo ekhokhelwe yikhiqizwa yakamuva, okusiza ekubhekiseni ngokunembile yonke iminyango ye-pelvis encane.
Imitholampilo ethandwa kakhulu yiyo "Imithi Yekhulu Lama-21", "Ultramed", "Idolobha Lab", "I-Invitro", "Zdravitsa" nokunye okunye. Ochwepheshe abanolwazi nabaqeqeshiwe kuphela abasebenza kuzo. Bayokusiza ukubala usuku lohlolo ngokufanele. Phela, okuningi kuxhomeke esimweni ngasinye. Iziguli eziningi zinesithakazelo sokuthi ingakanani le ultrasound gynecological? Intengo ingahluka kusuka kuma-ruble angu-500 kuya ku-3000. Kuzomenyezelwa kuwe ngaphambi kokuhlolwa. Uma kunesidingo sokwenza okungeziwe, izindleko zingase zibe ngaphezulu.
Zonke izifundo zihlukaniswe zibe izinhlobo ezimbili: ubulili kanye nesifo sangasese. Lokhu noma leyo ndlela ikhethwa ngokuhambisana nezici zomuntu ngamunye. Futhi, amandla okukwazi ukukwazi ukuwasebenzisa futhi iziqu zikadokotela zidlala indima.
Le ndlela isetshenziswa kaningi. Kuye, idivayisi ehlanganisiwe, ebizwa ngokuthi inzwa, isetshenziswa. Ihlanganiswe nekhondomu ekhethekile futhi igcwele i-gel. Emva kwalokhu, inzwa ifakwa ngaphakathi kwesiswini bese idlulisela isithombe esikrinini. Ngosizo lwedivayisi, izibalo eziningi zingatholakala ngokuthembeka. Ubude besifundo buvela kumaminithi angu-5 ukuya kwangu-20. Ngaphambi kokuphatha owesifazane kudingekile ukuhlanza amathumbu nokuvuthwa.
I-ultrasound isebenzisa kanjani udonga lwesisu? Ukuqhuba inhlolovo enjalo, kumele ugcwalise isambiso kuqala. Ngakho-ke, isitho sokuzala sizoba sesimweni esihle kakhulu sokuxilongwa. Ngaphambi kwenqubo, uchwepheshe usebenzisa i-gel engxenyeni engezansi yesisu, bese usebenzisa inzwa, inquma isimo sezitho esibukweni. Lolu hlobo locwaningo lunikezwa amantombazane abangenayo impilo yobulili - izintombi. Futhi, ukuhlukunyezwa kwenziwa omama abalindele futhi uma kungenakwenzeka ukuhlolwa kwesifazane.
I-ultrasound ye-gynecological: ngukuphi usuku lomjikelezo?
Ochwepheshe abaningi banxusa ukuba bahlolwe ngokushesha ngemva kokuphela kokuya esikhathini. Nokho, akunakwenzeka ukunikeza izincomo ezifanayo kuzo zonke iziguli. Abanye besifazane banconywa ukuthi balinde kuze kube phakathi komjikelezo noma ukuphela kwayo. Okunye okubalulekile ubude besikhathi sokuya esikhathini nokuhamba kwegazi. Ukuncoma okujwayelekile kwe-ultrasound kuyisifundo esikhathini sokusukela ngosuku lwesi-5 kuya ku-7 lomjikelezo. Ake sizame ukuqonda icala ngalinye ngokwehlukana.
Uma unqunywe i-ultrasound ye-gynecological - ngukuphi usuku lomjikelezo kungcono ukuvakashela udokotela? Kulesi simo, indlela ejwayelekile isebenza. Kungcono ukuxilonga ngokushesha ngemva kokuphela kokuya esikhathini. Nokho, kufanelekile ukunaka isikhathi sokujikeleza.
Njengoba ubude besikhathi eside (izinsuku ezingu-28), isifundo esenziwe ngosuku lwama-7 siyoba ulwazi oluhle kakhulu. Ngalesi sikhathi, ukukhula kwama-follicle amasha akukaqali, kanti i-endometrium inebuncane obuncane.
Uma umjikelezo wakho ufushane futhi uneminyaka engaba ngu-21, ukuxilongwa kufanele kwenziwe ngosuku lwesishiyagalolunye, ngoba ngosuku lwe-7 ovulation lungenzeka kakade. Kulokhu, ngaphansi kwesenzo se-progesterone, ungqimba lwe-endometrili luqina. Idatha etholakalayo ngeke ibe yinkomba ngokuphelele futhi inembile.
Abanye besifazane bangase babe nomjikelezo omude. Ubude benkathi buhluka ezinsukwini ezingama-35 kuya ku-40. Ukuxilongwa kulokhu kungenziwa futhi kamuva. Izinsuku ezijwayelekile zivela ezinsukwini ezingu-7 kuya kwezingu-20.
Uma udinga ukulandelela ukuphuka kobuciko, kutuswa ukuvakashela isikhungo sezokwelapha se-ultrasound izikhathi eziningana ngomjikelezo. Le nqubo ibizwa ngokuthi i-folliculometry. Udokotela uzobala ngokufanele izinsuku zokuhlolwa. Ngokuvamile kwenziwa izinsuku ezingu-5-6 ngaphambi kokuvuthwa okulindelekile, bese - ngokusho kwemiphumela yocwaningo. Nazi ezinye izinsuku ezilinganisiwe:
Emjikelezweni ojwayelekile: izinsuku ezingu-10, 12 no-14 emva kokuqala kokuya esikhathini;
Ngesikhathi esifushane: izinsuku ezingu-5, ezingu-7 no-10 kusukela ngenyanga;
Umjikelezo omude uhlinzekela ukuxilongwa ngezinsuku ezingu-16, 18 no-22.
Kuye ngemiphumela etholakala, isazi singashintsha isikhathi sokuhlola ngenye indlela.
Uma owesifazane esolwa ukuthi ukhulelwe futhi ufuna ukusungula leli qiniso besebenzisa i-ultrasound, isikhathi sokuxilongwa kuyoba sehlukile. Ukuhlukunyezwa kungabonisa imiphumela efanele kuphela amasonto amabili ngemuva kokubambezeleka. Ngomjikelezo omfushane kuyoba usuku lwama-35, kumjikelezo ojwayelekile - oneminyaka engu-42, nangesikhathi eside - i-49.
Amanye amadivaysi anamuhla akwazi ukubona iqanda lomntwana okhushulayo emasontweni amathathu emva kokukhulelwa (izinsuku ezingu-7 zokulibala). Kodwa-ke, zivame kakhulu emitholampilo yangasese kunezikhungo zezokwelapha zombuso.
I-Ultrasound ngesikhathi sokuya esikhathini
Ngingayenza i-ultrasound ngesikhathi iphuma? Uma ngabe i-excretions ibonakala njengokwezikhathi, ukuxilongwa okunjalo akuyona into ezwakalayo. Ngesikhathi senqubo, isitho sobulili sizogcwala igazi. Ukubona noma yiziphi izinhlayiya noma pathologies akunakwenzeka.
Uma ukuphuma kwegazi akuhlobene nokuya esikhathini, kuvunyelwe ukwenza i-ultrasound. Ngesizo sohlolo olunjalo kuyokwenzeka ukuba kunqunywe ngokuqinisekile umthombo we-excreta kanye nombangela wabo.
Ungayichaza kanjani izinkomba?
Ngemuva kokuba uhloliwe (i-ultrasound), idatha idluliselwa ngumjozi wezifo zogciwane. Qaphela ukuthi udokotela owenza ukuxhaphazwa, akakwazi ukukunikeza ukuxilongwa. Uphela unikeza isiphetho. Ngemuva kwalokho, udinga ukuphinde ubuye umgogodla wakho wegazi bese uthole isinqumo sokugcina. Izindlela zezinkomba zingashintsha kuye ngosuku lomjikelezo. Ake sicabangele, yiziphi izibalo nezindinganiso okufanele zibonwe ngabesifazane abahlolwayo ngokuncoma kukadokotela ekuqaleni komjikelezo. Izinkomba ezilandelayo zijwayelekile:
Isitho somzimba wesayizi 50-54-35 millimeters, lapho ubude, ububanzi nobukhulu buboniswa khona;
I-Ehogennost kufanele ibe yifane, futhi i-contours iqondile futhi ilingana;
Ubuningi be-membrane yamangqamuzana (endometrium) kuxhomeke ngosuku lokuhamba esikhathini;
Ama-ovari ngaphambi kokuvuthwa kwama-follicles anesayizi ka-37-20-26, kanti okulungile ngaso sonke isikhathi kunesilinganiso sobubanzi obukhulu.
Ubukhulu bama-tubes falsipian ngokuvamile azinqunywanga, njengokungavamile abakubonakali nje. Kwezinye izimo, ochwepheshe angacacisa ubude bomsele womlomo wesibeletho kanye nesimo se-pharynx yangaphakathi (ivaliwe).
Noma yikuphi ukuphambuka kulezi zimiso kungaba yinto evamile noma i-pathology. Ngokujwayelekile i-protocol ye-ultrasound ibonisa njalo izinkomba ezamukelekayo zosuku oluthile lomjikelezo.
Kusukela esihlokweni esinikeziwe ungafunda mayelana nokuqakatheka kwe-ultrasound gynecological. Ukumisa izinkomba kufanele kwenziwe kuphela udokotela. Khumbula ukuthi idatha etholakalayo ayitholakali. Isazi sichaza kuphela lokho akubonayo ekuqapha kwakhe. Izenzo ezengeziwe zithathwa ngumjozi wezifo zokwelapha. Kungase kudingeke uthathe izivivinyo ezengeziwe noma ufunde izifundo ukuze ucacise isithombe.
Ukuthola idatha enembile kakhulu nge-ultrasound, kubalulekile ukuqhuba isifundo ngezinsuku ezithile. Uma udinga ukuhlola isimo sesisu, kuhle ukukhetha isigamu sokuqala somjikelezo, ngoba engxenyeni yesibili yesendlalelo se-endometrili ingakwazi ukufihla amaphutha amancane nezinkinga ezimbi. Khuluma nodokotela futhi uthole ulwazi oluningi ngalokhu. Konke okuhle kunawe!
Kungani idolo livuvuka futhi libuhlungu? Izimbangela Nezokwelashwa
Ukuhlaziywa kwamanzi amaqanda
Apple izihlahla e Kolomenskoye (isithombe)
Car Izikali: injongo, izinhlobo, incazelo
Cancer Research Institute (saseTomsk, Russia) - iyona engcono kunazo
Penda ifenisha. Siphi isici lokukhetha ukuthi?
I-Moscow Jewelry Factory: ukubuyekezwa kuhlukile, ukukhetha kungokwakho
Ikhaya izizwe Traditional zomhlaba (izithombe)
Inani Igama Zlata - "igolide"
Qamba Magdalena: ukubaluleka, imvelaphi kanye nezimfanelo ezakhayo